Isilinganiso sokushintsha imali Okokuphrinta (GBP) Ukuze Rand (ZAR) bukhoma ku-Forex exchange emakethe
Forex exchange rate olusha: 01/08/2021 13:12
Okokuphrinta - Rand Intengo manje kwi Forex exchange emakethe ngesikhathi 01 August 2021
13:12:51 (Forex rate buyekeza 59 imizuzwana)
1 GBP = 20.31 ZAR
Ukushintshaniswa kwe-Forex - amanani wokushintshana wesikhathi sangempela sayo yonke imali. Ekushintshanisweni kwe-Forex kwe-1 okokuphrinta udinga ukunikela 20.31 ZAR. Kanye njalo ngemizuzwana engama-30, okokuphrinta isilinganiso sokushintshwa siyabuyekezwa. Ukuvuselelwa okusheshayo kwesilinganiso se- okokuphrinta.
Ishadi Forex Ukuhweba Rand - Okokuphrinta siphile, 01 August 2021
Ishadi Forex Ukuhweba okokuphrinta Ukuze Rand siphile, 01 August 2021
Ishadi lika okokuphrinta kuya Rand isilinganiso sokushintshaniswa ku 01 August 2021 ilapha, kwiwebhusayithi yethu. Ukuqapha ngempumelelo okokuphrinta kuya Rand ku-Forex, siyibonisa kwigrafu. Sebenzisa ishadi lesilinganiso sokushintshana ukuze uqonde ngokushesha izinguquko zokushintsha kwesilinganiso. Ishadi liyasebenzisana, ungalishayela.
Convert Okokuphrinta Ukuze Rand Okokuphrinta Ukuze Rand Isilinganiso sokushintsha imali Okokuphrinta Ukuze Rand exchange rate umlando
Online ukuhweba okokuphrinta (GBP) ukuze Rand okwamanje
Njalo ngeminithi silandelela izinga lokushintshana. Ukukhula kwe okokuphrinta ( GBP) ku- Rand ngalesi sikhathi - 0.02 ZAR. Isayithi libonisa itafula lokuthumela imizuzu eyi-10 ye okokuphrinta ku- Rand umzuzu ngamunye. Amanani we- okokuphrinta ngomzuzu abekwa etafuleni ukuze kulungele ukubona umehluko.
20.31 20.31 20.31 20.31 20.31 20.31 20.31 20.31 20.31 20.31
Online ukuhweba okokuphrinta (GBP) ukuze Rand last Ukuhweba ihora
Izinguquko zesilinganiso sokushintshana zingabukwa njalo ngehora. 0.02 ZAR - ushintsho ku- okokuphrinta ( GBP) ku- Rand kulelihora. Amanani we okokuphrinta ku- Rand njalo ngehora kukhonjisiwe kuthebula kuleli khasi. Bona idatha yesilinganiso sokushintshana amahora angu-10 etafuleni kuleli khasi.
13:09 13:03 12:56 12:50 12:44 12:38 12:32 12:26 12:20 12:14
Online ukuhweba okokuphrinta (GBP) ukuze Rand mkhuba lanamuhla 01 August 2021
13:12 12:11 11:11 10:10 09:10 08:10 07:10 06:10 05:09 04:09